Tobin’ny miaramila RM 1 : Nahazo fampitaovana ara-pahasalamana avy amin’ny vadin’ny Filoha -
AccueilRaharaham-pirenenaTobin’ny miaramila RM 1 : Nahazo fampitaovana ara-pahasalamana avy amin’ny vadin’ny Filoha
Vaindohan-draharaha ny sehatry ny fahasalamana ka tsy nataon’ny vadin’ny Filoham-pirenena, Voahangy Rajaonarimampianina ankilabao, nahazo fanampiana eo amin’izay sehatry ny fahasalamana izay ny tobin’ny miaramila RM1 etsy Andohanan’Analakely omaly tolakandro. Tonga nanolotra fampitaovana maro sy nitokana ny fotodrafitrasa nasiam-panavaozana teny an-toerana ny vadin’ny Filoha omaly tolakandro. Maro ireo fampitaovana ara-pahasalamana nentiny, natao hameno ny banga ao an-toerana, toa ny solosaina miisa roa, Autoclave fanadiovana ny fitaovana, kidoro fandriana miisa efatra, fanafody, sy kojakoja hilaina amin’ny sehatry ny fitsaboana, niampy ny fanarenana ny efitrano fandraisana marary sy ny fitsaboana eo anivon’ny toby miramila rezimanta. Tafiditra ao anatin’ny fankalazana ny andron’ny vehivavy moa ireto fanampiana ireto.
Ankoatra ny vady aman-janaky ny avy ao amin’ny toby moa dia anisan’ny misitraka ny toeram-pitsaboana ihany koa ny olom-pirenena rehetra, ny olom-pirenena izay afaka manantona ny toeram-pitsaboana raha sendra loza na tsy fahafahana manantona ireo toeram-pitsaboana hafa. Laharam-pahamehana ihany koa ireo fianakaviana sahirana mipetraka eny amin’ny manodidina an’Analakely. Manodidina ny 15 isan’andro ireo olona mitady fitsaboana eny an-toerana, ary marihina moa fa maimaim-poana avokoa ny tolotra ao amin’ny toeram-pitsaboan’ny RM1. Entina hanasoavana ny vahoaka tsy vaky volo no antony hanomezan’ny vadin’ny filoham-pirenena Voahangy Rajaonarimampianina ny fanampiana. Ankoatra ny tetsy Analakely dia anisan’ny efa andalam-pahavitana ihany koa ny toeram-pitsaboana miaramila natao hikarakarana ny reny sy ny zaza any Antsiranana. Ao anatin’ny fanakalazana ny andron’ny 8 Marsa izay hatrany moa dia maro ireo fandaharan’asa entin’ny vadin’ny filoha hanasoavana ny reny sy ny zaza izay, hanomezan-danja ny vehivavy malagasy.